October 13, 2020 – Sero Fero News
रिब्दिकोटमा बजार अनुगमन
Posted on October 13, 2020 (October 13, 2020) by सेराेफेराे समाचार
पाल्पा,असोज २७ पाल्पाको रिब्दिकोट गाउँपालिकाले बजार अनुगमन गरेकोे छ । गाउँपालिकाको बजार अनुगमन समितिबाट रिब्दीकोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ हार्थोक बजार र वडा नम्बर ७ बतासे बजार अनुगमन सम्पन्न भएको हो । अनुगमनको क्रममा पसलहरुले साइनबोर्ड नराखेको, पसल दर्ता नगरेको,मुल्य सूची नराखेको पाइएको छ । बजारबाट म्याद नाघेका विभिन्न किसिमका खाध तथा अन्य उपभोग्य वस्तुहरु […]
माथागढीमा नेपाल टेलिकमको टावरमा सोलार जडान
पाल्पा असाेज, २७ माथागढी गाउॅपालिका वडा नं. ६ भुटुकेमा रहेको नेपाल टेलिकमको टावरमा सोलार जडान गरिएको छ ।माथागढी गाउॅपालिका वडा नं. ६ भुटुकेमा रहेको नेपाल टेलिकमको टावरमा पछिल्लो समयमा नियमित रुपमा विधुत आपूर्ति हुन नसक्दा माथागढी गाउॅपालिका भित्रका विभिन्न ठाँउहरूमा नेपाल टेलिकमको टावर बन्द रहेको थियो । सोलार जडान भएसँगै सुचना संचारबाट टाढा रहनु पर्ने […]
तानसेन बुटवल सडकखण्ड दैनिक ३ घण्टा बन्द
Posted on October 13, 2020 (October 13, 2020) by सेराेफेराेन्यूज
पाल्पा , असोज २७ सिद्धार्थ राजमार्ग सोमबारदेखि दैनिक तीन घण्टा बन्द हुने भएको छ। राजमार्गअन्तर्गत तानसेन बुटवल सडकखण्ड असोज २९ सम्म बन्द हुने भएको हो । राजमार्गको विभिन्न ठाउँमा गएको पहिरो पन्छाउन सडक बन्द गरेर काम गर्नु परेको सडक डिभिजन पाल्पाका प्रमुख मुकुन्दराज अधिकारीले बताए। केही साता पहिले अविरल वर्षासँगै झरेको पहिरोले राजमार्गको दर्जनौं ठाउँमा […]
Posted in Featured, मुख्य समाचारLeaveacomment
काठमाडौं, असोज २६ चीनको छिङताओ सहरमा १२ जना मानिसमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण देखिएसँगै सरकारले सहरका सबै ९० लाख मानिसको परीक्षण गर्ने भएको छ । चीनले छिङताओका सबै मानिसको पाँच दिनभित्र कोरोना परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको हो । सहरको एक अस्पतालमा १२ जना मानिसमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै सरकारले कोरोना नियन्त्रणको लागि यस्तो योजना […]
Posted in Trending News, अन्तर्राष्ट्रिय, मुख्य समाचारLeaveacomment